आहा ! कति मिठो स्वर , बुवाले सानैमा छोडेर भागे , भिरमा फुलेकी प्रितीको जादुमय स्वर (भिडियो सहित) – Ap Nepal
नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालीका वडा नम्बर ६ मा पर्ने मछुवा भन्ने गाउँमा घर भएर बसोबास गर्दै आएकी २१ बर्षिय प्रीति रिमाल नाम गरेकी युबती हेर्दा जति राम्री छिन त्यति नै सुन्दर एवम मधुर छ उनको स्वर ।
उनको स्वरले कसलाई चाहिँ मन्त्रमुघ्ध नपार्ला र ! सानैमा बाबु गुमाएकी प्रीतीको घरको आर्थिक अबस्था भने एकदमै कमजोर रहेको छ । उनकि सहाराको रुपमा उनकी आमा रहेकीछिन । खेतीपाती र मेलापात गरेर नै जसोतसो उनिहरुले जिबन गुजारा गरिरहेका छ्न ।
यस्तो दुखैदुखमा हुर्कीएकी प्रीतिको कला भने अद्भुत रहेको छ । उनको स्वर एकदमै मन बहलाउने किसिमको रहेको छ । उनले कैयौं गीतहरु गाएर सुनाईन पनि, उनको जादुमय स्वर जति सुने पनि सुनौ सुनौ लाग्ने किसिमको रहेको छ । भुकम्पले घर र बाबुले सानैमा उनको परिवार चर्काएका रहेछन । कहिलेकाही जब अरुको बाबुलाई देख्दा भने आफ्नो पनि बाबु भइदिएहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भन्दै भक्कानिइन उनि ।
प्रिती रिमाल: गीत रेकर्ड गर्दा गर्दै बाबालाई सम्झिएर रोईन्। आज भयो प्रितीको गीत रेकर्ड पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
बाँकी तलको भिडियो हेर्नुहोस्...
यो पनि.. बलिउड अभिनेता अनु`पम खेर सामाजि`क सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छन् । उनी आफ्नो फ्यान्स माझ चर्चामा रहिरह`न पछिल्लो समय रोचक पोस्ट गरि`रहन्छन्।
अनुपमको बच्चाहरुसँग खास लगाव छ र उनी सामा`जिक सञ्जालमा बच्चाहरु`सँग सम्बन्धित पोस्ट गरिर`हन्छन्। हालै उनले सडकमा गीत गाइर`हेका तीन बच्चाको अत्यन्तै क्युट भि`डियो शेयर गरेका छन्।
मला`ई लाग्छ यो गीतको शब्दले दुनियाँ अहिले जुन कठिना`ईबाट गुज्रिरहेको छ त्यस`बारे बता`ईरहेको छ । तर शायद हामी सबै ठिक हुनेछौँ।सबैभन्दा उत्कृष्ट गीतको मज्जा लिनुहोस् । म यिन`लाई ग्रामी अवार्डको लागि नोमिनेट गर्न चाहन्छु र यिनलाई विजेता घोषित गर्छु । तपाई पनि सह`मत हुनुहुन्छ नि ?’
– भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्..
Prev४ भाइ छोरा छन् तर आमा-बाउको यस्तो बि’ जोग हुँदा पनि फर्केर हेर्दैनन्, भन्छन् रे ”बा को मुख देखे साइत बिग्रन्छ !”-हेर्नुहोस ( भिडियो सहित )
Nextरवीले पत्रकारिता छाडेर सक्रिय राजनीतिमा होमिने निर्णयसँगै काँग्रेसको यस्तो प्रस्ताव..
झाक्रीलाई प्रहरीले प, क्रेपछि बिरामी पुगे चौकी, हामीलाइ झाक्री चाहियो भन्दै भक्कानिदै रोए बि,रामीहरु (भि, डियो सहित)
घरेलु मैदानमा ३७ वर्षपछि बंगलादेशलाई नेपालले हराउदै जित्यो फाइनल
१४४ तलाको भवन १० सेकेण्डमा यसरी उडाइयो डरलाग्दो (भिडियो सहित)